पेटको बोसो कसरी घटाउने ? - Mitho Khabar
February 6, 2020 mithokhabarLeaveaComment on पेटको बोसो कसरी घटाउने ?
पेटमा जम्मा भएको अतिरिक्त बोसो कम गर्न घरेलु उपाय अपनाउन सकिन्छ । यसका लागि : –तातो पानीमा कागतीको थोरै रस र नुन मिसाएर हरेक दिन बिहान पिउनु राम्रो हुन्छ । यसले तपाईंको मेटाबोलिजम दुरुस्त हुन्छ र तौल पनि कम हुन्छ ।
–सकेसम्म खैरो चामलको भात खानु राम्रो हुन्छ । यसका साथै आफ्नो खानामा ब्राउन ब्रेड, ओट्सजस्ता खाद्य प्रयोग गर्नुपर्छ । –पेटको बोसो कम गर्न मिठाईबाट टाढै भएको राम्रो ।
मिठाई र तैलीय पदार्थबाट कमभन्दा कम खाँदा बोसो घटाउने मिहिनेत कम गर्नुपर्छ । किनभने यस्ता खानाले शरीरमा अतिरिक्त बोसो जम्मा हुन्छ । यस्तो बोसो पेट, तिघ्राजस्ता अंगमा जम्मा हुने गर्छ ।
डण्डिफोरबाट बच्न आजै छाड्नुहोस् यी ७ काम : अवस्य पढ्नुहोस
April 28, 2020 mithokhabar